Kordhinta Iibka: Xiritaanka Farqiga U Dhexeeya Iibinta iyo Suuqgeynta
Isniin, Maarso 4, 2013 Talaado, Maarso 5, 2013 Jenn Lisak Golding
Mawduuca ah beddelashada masarka iibka waxay ku jirtaa shirkad walba maskaxdeeda. Qeyb weyn oo ka mid ah isbeddelka ayaa ah sida aan u eegno iibka, iyo ka sii muhiimsan, sida istiraatiijiyadda iibka iyo suuqgeyntu ay isugu habboon yihiin sidii hore. Ururradu waxay u baahan yihiin inay falanqeeyaan sida ururkoodu ugu dhowaanayo iibka si joogto ah si aysan u lumin wax fursado ah. Kala-guurkaaga ka soo suuq-geynta iyo iibku miyay yihiin kuwo aan dhib lahayn? Ma siinaysaa macluumaad ku filan labada dhinac? Ma waxaad beegsaneysaa rajada saxda ah? Kuwani waa su'aalaha ay tahay inaad si joogto ah u weydiiso.
Kordhinta iibinta, feker ahaanteyda, waxay isu keentaa labada koox (iibinta iyo suuqgeynta). Waxay abuurtaa xiriir calaamadeysan, halkaas oo guusha midkood ay ku tiirsan tahay tan kale iyo taa lidkeed. Natiijo ahaan, kooxahani waxay noqonayaan kuwo isku dhafan waxayna abuurayaan qulquliyo shaqo oo fududeyn doona gacan qabashada iyo sii heynta macaamiisha.
Macaamiisheena TinderBox waxay la shaqeeyeen ururo kala duwan iyagoo siiya macaamiisha softiweerka maareynta soo-jeedinta iibka. Soo jeedinta iibku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka iibka, laakiin sidoo kale waxay garwaaqsanayaan in isdhexgalka ka hor inta uusan iibiyuhu gaadhin marxaladda soo jeedinta uu dejinayo xiriirka xidhiidhka hore u socda. Dhageysiga dhab ahaan macaamiisha iyo ka soo ururinta xogta suuqgeynta waxay kaa caawineysaa inaadan u dhaqaaqin oo keliya talaabada soo jeedinta, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad abuurto soo jeedin warbaahineed oo hodan ah oo rafcaan u ah rabitaanka iyo baahida rajadaas.
Waxaan la shaqeynay kooxda ka socota TinderBox si aan u sameyno cilmi baaris ku saabsan awoodsiinta iibka iyo sida ay u soo ifbaxeyso ciyaarta. Miyaad la kulantaa qaar ka mid ah xanuunka iibka? Isbeddello noocee ah ayaad ku sameyneysaa ururkaaga si aad isugu waafajiso iibka iyo suuqgeynta?
Tags: isgaarsiintamarketingKordhinta IibkaSoo Jeedinta Iibka